विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यतिबेला आफ्नो मातृभूमिप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो ? - नेपालबाहिरका नेपाली - साप्ताहिक
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यतिबेला आफ्नो मातृभूमिप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो ?
जेष्ठ ८, २०७२
सहयोगको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ
नेपालमा आइपरेको महाविपत्तिको घडीमा हामी परदेशमा बस्नेहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नैपर्छ । थोरै, धेरै जति सकिन्छ आर्थिक सहयोग गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । त्यसबाहेक हामी जहाँ रहे पनि हामी बसेको ठाउँमा सहयोगका लागि अभियान सञ्चालन गर्न सक्छौं । विदेशी संघसंस्था, कार्यालय, क्लब, स्कुल, विश्वविद्यालयजस्ता विभिन्न निकायसँग मिलेर कसरी, कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सक्छौं ।
आर्थिक क्षमता हुनेले, सक्नेले नगद रकम दिएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै प्राविधिक क्षमता हुनेले जनशक्ति, प्रविधि, कुनै उपकरण दिएर सहयोग गर्न सक्छन् । जुन हाम्रो मुलुकका लागि अत्यावश्यक नै छ । स्कुल, विश्वविद्यालयले स्टेसनरी सहयोग, विज्ञान प्रयोगशालाका लागि चाहिने सामग्रीहरू प्रदान गर्न सक्छन् । नेपालका स्कुल, कलेजहरू खुलेपछि कतिपयले स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने चाहना देखाउलान्, त्यसरी काम गर्न इच्छुकहरूलाई नेपाल सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । बरु हामी विदेशमा रहनेहरू त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा पठाउन पहल गर्न तयार छौं ।
यतिबेला विदेशमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्न तयार हुनैपर्छ । यो मुलुक बनाउने मौका पनि हो । सबैले फराकिलो मन देखाउने बेला हो ।
नेपालका लागि अहिले गरिएको सहयोगको यो क्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कम्तीमा वर्षको एक पटक अनिवार्य नेपाल जाने, वस्तुस्थिति बुझ्न सक्यो भने अझ कस्तो प्रकारको सहयोग गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकिन्छ । देश बनाउनमा मेरो पनि भूमिका रहन्छ, यो मेरो पनि कर्तव्य हो भनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
हवलचन्द्र लामा, प्रिन्सिपल,
निक्को स्कुल, जापान
देश बनाउन एकजुट हुनैपर्छ
मेरो विचारमा नेपालका सरदर ६० प्रतिशत घरधुरीका कोही न कोही हामी नेपाल बाहिर छौं । यसको आधाभन्दा बढी जनसंख्या विकसित मुलकमा छौं । म अमेरिका बसेको १६ वर्ष भयो । अहिले आफ्नै सानो व्यवसाय छ, त्यो व्यवसायबाट जीवन धान्न मात्र सकिएको छ । म ‘पार्टटाइम’ काम पनि गर्छु । अहिले देशलाई सहयोगको खाँचो छ । प्रशस्त भएर होइन, जोहो गर्न सक्ने रकम अनुमान गरेर सात लाख रुपैयाँ मातृभूमि नेपालका भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्नेसंकल्प हामीले गर्‍यौं । परिवारिक निर्णय भयो, असमर्थलाई नै सहयोग गरौं । थोरै भए पनि सकेको गरौं । हाम्रो सहयोगले दुई परिवारका लागि स–सानै भए पनि दुईवटा घर बन्छ कि भन्ने लागेको छ । नभए दुई टुहुरालाई पढाउन सक्छौं कि भन्ने पनि लागेको छ ।
म विदेशमा बस्नेहरूलाई आग्रह गर्छु, सबैले गरौं, सकेको गरौं । जबसम्म हामीभित्रको मानवता कमजोर हुँदैन, तबसम्म हामी बलियो रहन्छौं । यो हाम्रो सोच बदल्ने बेला हो । सरकारलाई दोष दिएर मुठी बाँधेर बस्नुभन्दा आफूले के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने बेला हो ।
हामी विदेशमा बस्नेले पनि स्वदेशका लागी केही गर्नुपर्छ । मातृभूमिलाई मलमपट्टीको खाँचो छ । मलमपट्टीका लागि मुठ्ठी खोल्नु जरुरी हुन्छ । हामी सामान्य परिवारले र हामी जस्ता अरू धेरैको सहयोग सागरमा एक थोपा पानी सरहमात्रै हुन सक्ला, तर हामीले यो सानो संकल्प गर्नुको पछाडि पनि केही स–साना कारणहरू पनि छन् । देश हाम्रो हो, हामीले नै बनाउनुपर्छ । देश भत्किएको कुरा मात्र नगरौं, अब देश बनाउने कुरा गरौं । महाभूकम्पले धरहरा लडायो, काष्ठमण्डप ढाल्यो, नौतले दरबार भत्कायो तर हामी नेपालीको छातीमा ठडिएको अठोटको धरहरा लड्नु हुँदैन । जाँगरको काष्ठमण्डप ढल्नु हुँदैन । आत्मसम्मानको नौतले दरबार भत्किनु हुँदैन । घर भत्किए पनि हाम्रो साहस भत्किनु हुँदैन । हाम्रो विश्वास मर्नु हुँदैन ।
हामीसँग सामथ्र्य नभएको हैन, संकल्प नभएको हो । आज नेपाल आमाको छाती चिरिएको छ । देश शोकमा डुबेको छ । संकटमा छ । अब यही शोक र संकटलाई संकल्पमा बदल्नु छ । संकल्प गरौं– सबैले गरौं, सकेको गरौं । देशमा उन्नति र समृद्धिका धेरै धरहरा, काष्ठमण्डप र नौतले दरबारहरू ठड्याऔं । गाउँगोठहरू फेरि बसाऔं ।
शिव प्रकाश, बोस्टन, अमेरिका
आवश्यकता र माग बुझेर सहयोग गरौं
आफ्नो मातृभूमि शोकमा डुबेका बेला हामी परदेशमा बस्नेहरू पनि उत्तिकै पीडामा छौं । नेपालमै भएको भए त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा अझ बढी थाहा हुन्थ्यो, तर बाहिर रहँदा अझ बढी छट्पटी हुँदो रहेछ । कतिखेर के हुने हो पत्तै नहुने । चैनले सुत्न पनि सकिएन ।
महाविपत्तिमा परेर धेरैले ज्यान गुमाए । त्यो पीडा असह्य बनेको छ । कति मानिसहरू घरबारविहीन बनेका छन् । बाँच्नेहरू पनि अत्यन्तै कष्टले जीवन गुजारा गरिहेका छन् । हामी परदेशमा बस्नेहरूले मातृभूमिमा यसरी छट्पटाइरहेका नागरिकहरूको राहत लागी केही गर्नैपर्छ । आफ्नो कमाइको केही अंश गाउँका क्षतिग्रस्त घरको निमार्णका लागि दिन सक्छौं । लुगाकपडा, औषधि, खानेकुरा दिएर पनि सहयोग गर्न सक्छौं । आआफ्नो ठाउँबाट देशलाई सहयोग गर्नु हामी विदेशमा बस्नेहरूको कर्तव्य हो ।
हामीले पीडितहरूको सहयोगका लागि खर्चिनुपर्छ । सम्बन्धित ठाउँको आवश्यकता, माग हेरेर त्यसैअनुसार कहाँ, के पठाउनुपर्छ हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । चाउचाउ, बिस्कुट मात्र बाँडेर हुँदैन । लामो समय पुग्ने गरी हामीले सहयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
टीका गुरुङ, नमोबुद्ध आमा समुह, हङकङ
फजुल खर्च घटाएर पीडितलाई सहयोग गरौं
नेपालमा यतिबेला आइपरेको विपत्तिले विदेशमा छरिएर रहेका हामी नेपालीहरू अत्यन्तै दु:खी छांै । यो समय हाम्रा लागि प्रतिकूल छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा विदेशमा हुँदा झनै गार्‍हो हुँदो रहेछ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा देखिने तस्बिर र समाचारहरूले त झन् मनै रुवाउँछन् ।
परदेशमा रहनेहरूले आफ्नो देशका लागि सकेको सहयोग गर्नु कर्तव्य हो । सक्नेहरूले आर्थिक सहयोग गर्नु त स्वभाविक नै भयो । अन्य नेपालीहरूले पनि आ–आफ्ना ठाउँमा सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनैपर्छ । विपद्का बेला हामीले योगदान दिन सकेनौं भने कहिले गर्ने ? प्रत्येक गाउँ, सहर, जिल्लाबाट नेपालीहरू बिदेसिएका छन् । सकिन्छ भने आफ्नै गाउँठाउँ फर्किएर निर्माण कार्यमा जुटौं । सकिँदैन भने कम्तीमा आफ्नो ठाउँका लागि केही योगदान गरौं । अर्काको देशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै देशमा पसिना बगाउनु उचित होला । नेपाल रोइरहेका बेला सहयोग नगरे कहिले गर्ने ? बरु नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेशमै बस्ने प्रबन्ध मिलाओस् ।
हामी परदेशमा रहे पनि राहत जुटाउने अभियानमा साथ दिन्छौ । नेपालमा भैदिएको भए निर्माण कार्यमा अगाडि बढ्थ्यांै होला । छिटै नयाँ नेपालको निर्माणमा सहभागि हुने आशा गरेको छु ।
तारा उदासी, इजरायल
हामी युवाहरू अर्काको देशमा पसिना बगाउँदै, मातृभूमि रोएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ । यो मनमा कति छट्पटी हुन्छ । रोइरहेको नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न नपाउँदा मन कटक्क हुन्छ ।
सम्पूर्ण पीडितहरूलाई हामी परदेशीको सन्देश साथै आर्थिक सहयोग गर्ने योजना छ । जति जे हुनु थियो भयो भैसक्यो । आफुलाई कमजोर नबनाउनुहोस् । देशका लागी हामी एकजुट भयौ भने धेरै गर्न सकिन्छ । विदेश बस्नेले आफू जन्मेको मातृभूमिप्रति सद्भाव जगाउनुपर्छ । अहिले देशलाई मनोबलको खाँचो छ, साथै आ–आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने आर्थिक सहयोग गरौं ।
जो विदेशी भूमिमा छ, उसलाई थाहा हुन्छ देशको माया कति लाग्छ भनेर । सही अर्थमा देशले के मान्यता राख्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपालबाहिर गएपछि मात्र थाहा हुन्छ । विदेशी भूमिमा म पनि श्रम गरेर बाँचिरहेकी छु । मलगायत विदेशी भूमिमा रहनेहरूले नेपालको दुखेको घाउमा मल्हम लगाउनु कर्तव्य हो । जसरी जुन रूपमा हुन्छ हामीले त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ, गरिरहेका पनि छौं ।
विदेशमा सिकेको र आर्जेको ज्ञान, सीप अब मातृभूमिका लागि उपयोग गरौं । यो दुखद क्षणलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अब नेपालमै बस्ने अबस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।
हामी नेपाल बाहिर रहनेहरू जुन देशमा छरिएर रहेका भए पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहेका छौं । अझ एकजुट हुनु आवश्यक छ । पीडितहरूलाई सानोभन्दा सानो सहयोग गर्न सके ठूलो राहत हुनेछ । हाम्रो सानो सहयोगले धेरैको ज्यान जोगिन सक्छ ।
रोशन लामा, दोहा, कतार
पीडितहरूलाई सान्त्वना, आँट, हौसला, उचित सल्लाह, मनोबल बढाउने काम गर्न सके पनि धेरै राहत हुन्छ । सक्नेहरूले आर्थिक सहयोग गर्नु
कर्तव्य हो ।
पूर्णिमा राई, इजरायल
नेपाल शोकमा डुबेको अवस्था छ । त्यसैले हामी प्रवासमा कार्यरत नेपाली साथीहरूले एक–दुई पैसा मात्र जुटाए पनि भूकम्पपीडितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
तुम्बापो पूर्ण लिम्बु, मलेसिया
प्रकाशित :जेष्ठ ८, २०७२
विदेशमा नेपाली साहित्यको ठूलो बजार छ
टेलिश्रृंखलाबाट चलचित्रमा आएको छु
विदेशमा अध्ययन : रोजगारमुखी शिक्षा, आकर्षक जीवनशैली
आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने सरल तरिका
चंखे शंखे पंखे अब विदेशमा
आ–आफ्नो रुचि एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो
नेपालबाहिरका नेपालीबाट अरु
डिभीको घनचक्कर कार्तिक २७, २०७४
कतार संकट : कस्तो असर पर्ला नेपालीहरूमा ? जेष्ठ २७, २०७४
के अमेरिका सोचे जस्तै छ ? मंसिर २४, २०७३
अस्ट्रियाका नेपालीहरू मंसिर १४, २०७३
अल्डरसट्स : बेलायतमा मिनी नेपाल कार्तिक ११, २०७३
विदेशको दसैं आश्विन २१, २०७३
विदेशको तीज भाद्र २०, २०७३
साउदी अरेबियामा बस्ने नेपालीहरू श्रावण २९, २०७३
इजरायलमा नेपालीहरू असार १३, २०७३
क्यानाडामा बस्ने नेपालीको कथा असार १, २०७३